Amanani amahle kakhulu eselula | Gcina MANJE kusikweletu sakho | Izindaba zamagajethi
Amanani weselula ahamba phambili atholakala emakethe
Esikhathini esingengakanani esidlule, noma imuphi umsebenzisi wedivayisi ephathekayo angakhetha phakathi kwamanani ambalwa amaselula, ezimeni eziningi ayefana kakhulu futhi okumele sikhokhe imali enkulu ngawo. Ngenhlanhla, konke sekushintshe kakhulu ngokuhamba kwesikhathi futhi namuhla kukhona inani elikhulu labasebenza opharetha beselula abakhona emakethe abasinikeza inani elikhulu lamanani eselula. Ezinye ezishibhile kakhulu, ezinomehluko omkhulu phakathi kwazo futhi nangamanani ahlukahlukene kakhulu. Ukwenza lokhu namhlanje sizokwenza ukuqhathanisa okuthakazelisayo phakathi kwabo bonke. Njengoba kunzima ukuqala ndawo, sizokwenza ngokubukeza amanani amathathu aphezulu esingawaqasha njengamanje:
Imali ebiza kakhulu: I-8GB ye-simyo nge- € 5
Izinga eliphelele kakhulu: I-15GB ne-Virgin Telco engenamkhawulo ngo- € 9 kuphela
Izinga leselula elihamba phambili: I-25GB nomsebenzi wezimali ongenamkhawulo ngo- € 14,90 kuphela
Ezweni lakithi kusekhona opharetha abathathu abakhulu abanjengoMovistar, iVodafone kanye no-Orenji, abalandelwa buqamama ngulowo osevele wakudala njengoMásMóvil. ukungena kukazwelonke yiqembu le-Euskaltel. Eduze kwalokhu sinama-opharetha abonakala njengathi asinikeza amanani athakazelisayo futhi ashibhile.
Linganisa Dala isilinganiso sakho esingu-10GB Simyo 10GB € 6 / ngenyanga
Linganisa i-14.95 Amena 20GB futhi angenamkhawulo. € 14.95 / ngenyanga
Linganisa i-Plus 8GB izingcingo ezingenamkhawulo ne-8GB € 8.90 / ngenyanga
Isilinganiso seLin SinFin idatha engenamkhawulo nezingcingo ezingenamkhawulo € 35 / ngenyanga
Isilinganiso se-Go Top Orange Idatha engenamkhawulo nezingcingo ezingenamkhawulo € 35.95 / ngenyanga
Uma ucabanga ngokushintsha ama-opharetha noma ukushintsha amanani, hlala nathi ngoba Kulesi sihloko sizokukhombisa amanani eshibhile ashibhile futhi angabizi kangako atholakala emakethe.
Njengamanje amanani eselula e- I-Yoigo Zingezinye ezikhanga kakhulu emakethe, ikakhulukazi ngenxa yenani elikhulu le-GB abanikela ngalo kubasebenzisi, ngamanani aphansi kakhulu. Abasebenzisi abaningi baphequlula inethiwekhi yamanethiwekhi isikhathi eside, kwesinye isikhathi badinga izingcingo ezingaphansi nezincane futhi badinga okuningi ukuthola idatha etholakalayo ukusebenzisa i-WhatsApp, i-Facebook noma olunye lwezinhlelo eziningi ezidinga ukuxhunywa unomphela kwi-Intanethi.
I-Yoigo ikwazile ukuthola lesi sidingo sabo bonke labo basebenzisi abangakwazi ukuphelelwa ama-megabyte kuhlelo lwabo lwedatha. Eqinisweni, uyazi imali yayo edume kakhulu: La SinFín. Lesi silinganiso sine-GB engenamkhawulo yokuzulazula neselula yakho, futhi, ngaphezu kwalokho, inezingcingo ezingenamkhawulo. ISinFín de Yoigo ingelinye lamanani ambalwa anikezela inani eliphakeme kangaka lama-gigabytes ongawachitha ngo- € 35 / ngenyanga. Uma ufuna ukusebenzisa ngokunenzuzo lokhu kwehliswa kwemali yakho yenyanga unga kwenze kusuka lapha.
Ezinyangeni ezimbalwa iMásMóvil isukile ekubeni yinkampani ngaphandle kokutholakala okuningi emakethe njenge-opharetha yeselula ebonakalayo kuya ube opharetha wesine waseSpain, ngokuthengwa kweYoigo.
Isilinganiso semali kaMásMóvil sehlukaniswe kabili: amanani asevele amisiwe yi-Operator kanye namazinga ongawamisela ngendlela oyithandayo. Izinhlelo asinikeza zona iMásMóvil zimbili: i-8 GB nezingcingo ezingenamkhawulo ze- € 8,90 ezinyangeni ezintathu zokuqala kanye ne-20GB enezingcingo ezingenamkhawulo ze- € 14,90.
Izingcingo ezingenamkhawulo ziyindlela ejwayelekile yamanani amisiwe we-MásMóvil. Kepha uma ungumuntu oshibilika ngaphezu kwezingxoxo nefoni yakho ephathekayo, okungcono kakhulu kuwe ukumisa isilinganiso sakho ukuze usilinganise. Ngale ndlela, ungangeza inani eliphakeme lamagig (20GB) bese ushaya ngamasenti ayi-0 ngomzuzu. Ngalokhu kulungiswa uzokwazi ukonga ama-euro ambalwa uma uqhathanisa naleyo esivele inayo iMásMóvil nge-8GB.
Yenza isivumelwano nganoma iyiphi yalezi zilinganiso ngokuchofoza lapha.
iwolintshi Njengamanje usemabhizinisini anzima noVodafone wokuba nethuba lokuba yinkampani ephathekayo yesibili emakethe. Ngalokhu lenze ukuvuselelwa kwawo wonke amanani alo ezikhathini zamuva, okuholele kukhathalogi ebanzi kakhulu futhi ethakazelisa kakhulu. Ngemuva kweminyaka eyisikhombisa asisazitholi izimali ezidumile zezilwane, kepha sesinike indlela Iya ngamanani.
Abasebenzisi abadinga kakhulu ubuningi nekhwalithi basenhlanhleni, ngoba amazinga e-Go aphendula ngqo kulawo maphuzu. Ngalo mqondo, i-Orange isinikeza amanani Yiya Phezulu futhi Ukhuphuke, bobabili abanedatha engenamkhawulo, umehluko wokunikezwa ngakunye usekhonweni lokubuka okuqukethwe okusakazwayo ngekhwalithi ephezulu (eyodwa ku-HD kanti enye ifinyelele ku-4K) futhi zombili ngezingcingo ezingenamkhawulo.
Kepha amanani anama-gigabytes amaningi ongawasebenzisa akuzona zonke izethameli futhi yinto u-Orange acabange ngayo. Ngalesi sizathu esifanayo, inikeza amanye amanani amathathu anama-gig ambalwa: Okubalulekile, Go Flexible kanye Nezingane. Nge-Essential, i-Orange isinikeza i-7GB nezingcingo ngamasenti ayi-0 ngo- € 14,95 / ngenyanga. Isilinganiso se-Orange's Go Flexible sisinikeza ithuba lokuba nezingu-16,67GB nezingcingo ezingenamkhawulo ze- € 24,95 / ngenyanga. Ekugcineni, isilinganiso Sezingane sine-inthanethi efinyelela ku-2GB ngo- € 8,95 / ngenyanga futhi elungele amaphilisi noma ama-laptops akho. Uma unesithakazelo kumanani weGo Go Orange, unga baqashe kusuka lapha kalula.
Inkampani ebomvu ngenye yezinto ezinkulu ngaphakathi kwendawo yaseSpain futhi lokho futhi kusinikeza ngamanani amaningana weselula kuphela. Njengo-Orange noma iMovistar, iVodafone isinikeza zonke izinhlobo zamanani, anezici ezahlukahlukene kakhulu namanani azo zonke izinhlobo.
Inkampani ebomvu isondele kuzo zonke izinhlobo zabasebenzisi, kusukela kulabo abadla ama-megabyte amaningi nemizuzu kuya kulabo abachitha imali eyodwa noma enye. Ngakho-ke, sinakho I-Mobile Mini, engenamkhawulo, iMaxi engenamkhawulo nenani eliphelele kulabo abadla okuningi ngokuya ngemininingwane nemizuzu yezwi.
Kulabo abakhuluma kakhulu futhi basebenzise idatha, iVodafone yethula i-Unlimited total GB engenamkhawulo ku-5G, imizuzu engakhawulelwe. Konke ngo- € 47,99 / ngenyanga. Izinga eliphakathi nendawo yi-Unlimited Maxi way ene-GB engenamkhawulo kunethiwekhi ye-4G +, imizuzu engenamkhawulo. Konke lokhu ngo- € 36,99 / ngenyanga. Ekugcineni, okungenamkhawulo kungumnikelo onedatha engenamkhawulo kunethiwekhi ye-4G (isivinini esikhulu sokulanda esingu-2Mbps) nemizuzu engenamkhawulo ye- € 32,99 ngenyanga.
Uma unentshisekelo kumanani weselula kaVodafone, ungawaqasha ngaphansi kwemizuzu engu-3 ukusuka lapha.
I-Movistar noma yini efanayo, iTelefonica endala ingumbusi omkhulu wemakethe yezingcingo, ngenxa yokutholakala kwayo okuhle cishe kunoma iyiphi indawo yezwe lethu kanye nangensizakalo enhle ayinikeza amakhasimende ayo. Ngeshwa amanani abo awaphansi njengoba iningi lethu lingathanda.
Njengoba abanye opharetha bekwenzile, iMovistar iphinde iguqule ukunikezwa kwayo kwezinga lamaselula, noma kungenjalo ngokujulile njengokwenza kwe-Orange. Ngalo mqondo, iMovistar isinika amanani amathathu, lapho inani elikhulu lama-gigabytes ligqamile.
La Isivumelwano seMovistar isilinganiso esingu-2 Kungabekwa ngokuthi "isilinganiso esiyisisekelo", ngoba isinikeza u-5GB ukuzulazula ngezingcingo zethu zeselula nemizuzu engama-50 ngezingcingo ze- € 15 / ngenyanga. Uma sikhuphukela kuphothifoliyo yeMovistar, isilinganiso esilandelayo yi-XL Contract esisinikeza izingcingo eziyi-15GB nemizuzu engenamkhawulo yezingcingo ezihamba ngocingo nokuhamba nge- € 24,95 ngenyanga. Amanani wokugcina, inkontileka engapheli, ine-GB engenamkhawulo, imizuzu ne-SMS ngentengo engu- € 39,95 / ngenyanga.
Omunye opharetha obonakalayo ongeke alahleke kulolu hlu ngu I-Pepephone lokho kusinikeza amanani ancintisanayo kakhulu, kuzo zonke izici esingazithola emakethe. Ngokuqondile, iyasinikeza amanani amathathu ancintisana kakhulu maqondana nayo yonke imakethe. Ngale ndlela, sithola isilinganiso sokuqala esifaka phakathi i-5GB nezingcingo ezingenamkhawulo ze- € 7,90 / ngenyanga. Izinga eliphakathi lisinikeza i-10GB nemizuzu engenamkhawulo ye- € 11,90 ngenyanga.
Ekugcineni, sithola okungaba isilinganiso esinenzuzo enkulu: 39GB nemizuzu engenamkhawulo yezingcingo ze- € 19,90 / ngenyanga.
Yebo bangani, u-Amena ubuyile. I-opharetha eluhlaza yayihamba nabaningi bethu ngaleso sikhathi futhi, singasho, ukuthi kuyinto yakudala uma kukhulunywa ngocingo oluphathekayo. U-Amena ubuyile empilweni ngenxa ye-Orange futhi amanani ayo ayamangalisa. Lo opharetha ufana nokuzivumelanisa nezimo futhi bakubonisa ngokusobala ngamanani abo. Izinhlelo zayo zamaselula zigxile ohlotsheni ngalunye lomsebenzisi: isilinganiso esisodwa salabo abasebenzisa okuncane okuhambayo, esinye kulabo abakhuluma okuncane namabili kulabo abafuna konke. Amanani amane amangalisayo.
Isilinganiso sokuqala esalabo abangasebenzisi foni yabo ngaphandle kwekhaya. U-Amena ubacabangile futhi ubanikeza i-4GB, ushayela ngamasenti angu-0 ngomzuzu nange-SMS engenamkhawulo ngo- € 6,95 / ngenyanga. Kepha uma ukhuluma kancane kusuka kufoni yakho ephathekayo, ungahle ube nentshisekelo esilinganisweni nge-10GB, imizuzu engenamkhawulo kanye ne-SMS engenamkhawulo ngo- € 9,95 ngenyanga.
Inkampani eluhlaza ikunikeza uhlelo lweselula olunama-25GB, izingcingo ezingenamkhawulo kanye ne-SMS ngo- € 19,95 / ngenyanga. Kepha uma i-10GB inganele kuwe, uhlelo lwakamuva luzokuthakazelisa nakakhulu. Izinga lokugcina likunikeza ama-30GB, izingcingo ezingenamkhawulo ne-SMS ngo- € 24,95 / ngenyanga.
Siyazi ukuthi kunzima kakhulu ukukhetha isilinganiso sama-Amena, ngoba muhle impela. Uma ungathathi isinqumo, kulesi sixhumanisi ungathola eminye imininingwane.
Umbala wewolintshi kaSimon akuyona into eyenzakalayo futhi lokhu futhi kuyinkampani yeqembu le-Orange. Kodwa-ke, uSimo unesici esingajwayelekile futhi esihlukile: ungakha isilinganiso sakho. Ungalungiselela uhlelo lwakho ngemininingwane engaphezulu noma emincane nangamaminithi wezwi amaningi noma amancane. Okufunayo.
Ngaphambi kokuchaza ukuthi ukumiswa kwesilinganiso esenzelwe wena kusebenza kanjani, ngifuna ukukutshela ngamanani uSimo asevele ekunikeza wona amisiwe. Le nkampani isinikeza amanani amane esingayithola. Sinezilinganiso ezingenayo i-quota, okungukuthi, ama-euro angama-0. Sinesilinganiso esincane esifaka izingcingo imizuzu engama-20 no-100MB ngo- € 2 ngenyanga. Izinga elifanele leWhatsApp elinamakholi amaminithi angu-50 no-100MB ngo- € 3,5 / ngenyanga. Futhi ukusethwa kokugcina kungokwalabo abakhuluma futhi bacwebe kakhulu. Lokhu kusinikeza imizuzu eyi-100 ne-2GB nge- € 6,5 ngenyanga.
Uma engekho kulawa mazinga angenhla akukholisa, khumbula ukuthi ungazakhela owakho ngendlela elula kakhulu. Into yokuqala kuzodingeka ukhethe idatha ongayisebenzisa ngeselula yakho. Awukwazi ukukhetha idatha ozobhekabheka, kepha ubukhulu obungama-40GB. Kamuva, kufanele ukhethe inani lemizuzu ozoyishayela, kusuka kumizuzu engu-0 kuye kuzingcingo ezingenamkhawulo. Isincomo sethu, kulokhu, sicace bha: yenza isilinganiso sakho. Akukho okungcono njengokwazi ukukhetha lokho ofuna ukukusebenzisa ngokwemininingwane nangemizuzu yezwi. Kodwa-ke, uma ufuna ukubona wonke amanye amathuba uSimo awanikezayo, ngena lapha.
ILowi ingenye yezinkampani zomakhalekhukhwini ezaziswa kakhulu abasebenzisi, sibonga izintengo zayo zokonga kakhulu kanye nethuba lokudala isilinganiso ngokuphelele ngendlela esithanda ngayo. Ungaba futhi ulungiselele isilinganiso sakho kusuka ku-8GB kuye ku-30GB yedatha kuselula yakho futhi, ngokwemizuzu yezwi, bonke banamakholi angenamkhawulo.
Uma kufanele sihlale nelinye lamanani abo, lokho ngokungangabazeki kungaba yisilinganiso Sakho nge-8GB ngo- € 7,95 ngenyanga. Intengo yokuncintisana enkulu futhi ayinakuhlulwa. Ungabona konke okunye okungenzeka linganisa izilungiselelo nezici ezivela lapha.
Yisiphi isilinganiso ositholile njengamanje futhi yisiphi ongasishintsha uma ukwazi? Njengoba ubonile, amathuba awapheli futhi konke kuncike kuwe. Ungahlali futhi uhlale ubukele lokhu kungena ngoba sizokuvuselela njalo ngenyanga. Futhi uma ungatholanga isilinganiso sakho esihle lapha, ungahlala usebenzisa i- Ukuqhathanisa ucingo lweRoams ukuthola inketho ehamba phambili ekuvumela ukuthi ugcine.